गह’भरि आँ’सु लिएर उप’स्थित भए मेस्सी:: Mero Desh
गह’भरि आँ’सु लिएर उप’स्थित भए मेस्सी
Published on: २४ श्रावण २०७८, आईतवार ११:३८
२४ साउन, काठमाडौं । अर्जेन्टिनी सुपर स्टार लियोनल मेस्सी बार्सिलोना छा’ड्नुअघि पत्रकार सम्मेलनमा गहभरि आँ’सु लिएर उपस्थित भएका छन् । हलमा उपस्थित हुँदा नै उनका आँखा रसाएका थिए ।
२१ वर्ष बार्सिलोनामा बिताएका उनले आफूले क्लब छाड्ने कहिल्यै कल्पना नगरेको बताए । ‘म र मेरो परि वार यहीं बस्न तयार भएका थियौं’ उनले भनेका छन् ।
मेस्सी र बार्सिलोनाबीच नयाँ सम्झौताको सह मति पनि भएको थियो । तर आर्थिक अवस्था र ला लिगाको नियम का कारण हस्ताक्षर हुन नसकेको बार्सिलोनाले बताएको छ ।
यो पनि,,मेस्सीले छाडेपछि बार्सिलोनालाई कस्तो असर पार्छ ?
‘२४ साउन, काठमाडौं । लियोनल मेस्सीले अब बार्सिलो नाबाट अर्को सि’जन खेल्ने छैनन् भन्ने समाचारसँगै शुरु भएको च`र्चा अ’झै सेलाएको छैन । यो समाचारले बार्सिलोनाका समर्थकलाई भावनात्मक रुपमा धक्का लागेको छ । क्लबले भने आफ्नो इतिहासका सबभन्दा म’हत्वपूर्ण खे’लाडी मात्र गुमाएका छैनन्, अरु क्षति पनि व्यहोर्दैछ ।
बार्सिलोनाका लागि मेस्सीले गरेको योगदान स्पष्ट नै छ । यद्यपि उनले व्यावसायिक रुपमा बार्सिलोनाको लागि के दिए ? कति समर्थक बनाए ? यो निकै म`हत्वपूर्ण हुन्छ ।मेस्सीलाई गुमाउँदा त्यसको अस’र गोल, एसिस्ट र ट्रफीमा मा’त्र नभ`ई धेरै कुरामा पर्छ ।
अब स्पेनिस क्लबलाई अर्जे’न्टनी खेलाडी विना नै मैदा नभित्र र बाहिरका धेरै चु`नौतीको सामना गर्न नयाँ योज ना आवश्यक देखिन्छ । मेस्सीले छाड्दा बार्सिलोनालाई पर्न सक्ने केही असर :
खेलमा पर्ने असर
मेस्सीको अनुपस्थितिले बार्सिलोनालाई खेलमा ठूलो असर पार्छ । मेस्सीले बार्सिलोनाको लागि १७ सिजन मा जुन किसिमको प्रदर्शन गरे, त्यो साँच्चै नै अविश्वसनीय थियो । उनी क्लबको लागि सबभन्दा धेरै गोल गर्ने खेलाडी हुन् ।
‘सबैभन्दा मह`त्वपूर्ण खेलाडी पनि थिए र बार्सिलोनाको इतिहासमा उनले सबभन्दा धेरै खेल जिताएका छन् ।
बार्सिलोनाका लागि खेलेका ७७८ खेलमा मेस्सी ले ६७१ गोल गरेका छन् र ३०५ गोलमा सहाय क बनेका छन् । यो क्रममा उनले क्लबका लागि ३५ उपाधि पनि जिताएका छन्, जसमा चारवटा च्याम्पियन्स लिग, १० ला लिगा र तीन क्लब विश्वकपका उ’पाधि पनि सा`मेल छन् ।
‘पछिल्लो दुई दशकदेखि मेस्सी सबभन्दा महत्वपूर्ण खेला डीको रुपमा रहे । उनले सबै किसिमको रेकर्ड तोडे र स्पेन मा आठ सिजनमा मेस्सी सबभन्दा धेरै गोल गर्ने खेला’डी को रुपमा रहे । अब मे’स्सीको रेकर्डको हाराहारीसम्म पनि पुग्ने कुनै खे’लाडी बार्सिलोनाले ल्याउला ?
बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोआन लापोर्टाले मेस्सी ले बार्सिलो नाको समग्र आम्दानीको एक तिहाइ को हिस्सा बनेको ब ताएका छन् । मेस्सीको उपस्थितिले मात्र पनि क्लबलाई धेरै तरिकाबाट आम्दानी भइरहेको थियो ।
जसमा स्पोन्सरसिप, टिसर्ट बिक्री पनि छन् । बार्सिलोनाले बेच्ने हरेक १० टिसर्टमा आठवटा मेस्सीका हुन्थे । त्यस्तै टिक’ट बिक्रीबाट पनि उल्लेख्य आम्दानी हुन्थ्यो । मेस्सी विना स्व’भा विक हि’साबमा नै बार्सिलोनाले त्यति धेरै नाफा गर्न सक्दैन ।
एक अनु’मानअनुसार बार्सिलोनाले मेस्सीकै कारण वार्षिक २५ देखि ३० करोड युरो आम्दानी गर्ने गरेको छ । अब यो आ`म्दानी बार्सिलोनाले गुमाउनेछ, जबकि बार्सिलोना अहि ले सबभन्दा कठिन आर्थिक समस्याको सामना गरि रहेको छ । यति ठूलो आम्दानी पुनः प्राप्त गर्नु त्यति सजि लो छैन ।
ला’मो समयदेखि मेस्सी बार्सिलोनाको सबभन्दा महत्व पूर्ण फिगरको रुपमा रहँदै आएका छन् । उनी सर्वकालीन उत्कृष्ट खेलाडीका रुपमा मात्र होइन, उनको नम्रता, संयमि त स्वभाव र शान्त व्यक्तिगत जीवनको कार´ण पनि उनले ठूलो संख्यामा समर्थकको माया पाएका छन् ।
उनी विशेषगरी युवा समर्थकको लागि मैदान भित्र र बाहिर मार्गदर्शक पनि हुन् । उनी राम्रो नैतिकता र सिद्धान्त भए का व्यक्ति हुन् । मेस्सी कै कारण बार्सिलोनाका समर्थक स्पेनमा मात्र नभई विश्वभर छन् । अब मेस्सीसँगै बार्सिलो नाले आफ्ना धेरै समर्थक गुमाउनेछ ।
जब बार्सिलोनाको ब्राण्डको कुरा गर्नुहुन्छ, पछि ल्लो १७ वर्षमा बार्सिलोनाको पर्यायजस्तै बन्न पुगेको छ । अहिले बार्सिलोना क्लब र शहर दुवै मेस्सीको प्रभावसँग जोडिए का छन् । मेस्सी को समयमा स्पेनमा बार्सिलोना संस्था पनि निकै वि’क’सित भएको छ ।
अब उक्त समय सकिने बेलातर्फ आएको छ